ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံ ရှိ ငှားရန် Apartment Rent in Dagon (ID-269), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ငှားရန် - တိုက်ခန်း - Apartment Rent in Dagon (ID-269)
1080 sqft apartment area for rent, nearby Boyoke Aung San Market and Park Royal Hotel in Dagon Township. Apartment has Living-room, Two Bed-rooms, Kitchen and Bath-rooms. Fully furniture and2air-conditioners are already included.
Rent Price - 700 USD (Nego)
Apartment Rent in Dagon (ID-269)
ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးနှင့် Park Royal ဟိုတယ်အနီးတွင် တည်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၀၈၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် လေအေးပေးစက် နှစ်လုံး ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။
တိုက်ခန်း၏လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၇၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်း (ID-269)
Property ID: S-1185931
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Apartment Rent in Dagon (ID-269)
Golden Crown Apartment
APR-219, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(25x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-183, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(14x70) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-181, န၀ဒေးလမ်းတွင် အကျယ်(15x60) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-177, ယောက်လမ်းတွင် အကျယ်(15x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR- 172, န၀ဒေးလမ်းတွင် အကျယ်(18x60) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
Apartment Rent in Dagon (ID-263)
APR-171, ပန်ထျာလမ်းတွင် အကျယ်(18x52) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-167, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(15x50) ရှိ တိုက်ခန်းအမြန်ငှားမည်။
APR-127, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(25x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-089, န၀ဒေးလမ်းတွင် အကျယ်(15x60) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-085, ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းတွင် အကျယ်(14x70) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
ဒဂုံမြို့ နယ် အောင်ဆန်းကွင်းအနီးရှိ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ တိုက်ခန်းကျယ်ငှားရန်ရှိသည် (Code - 156)
APR-084, ယောက်လမ်းတွင် အကျယ်(15x55) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-080, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-067 ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် (980)Sqft ရှိ အခန်း အမြန်ငှားမည်။
APR-066 ယောက်လမ်းတွင် (825)Sqft ရှိ အခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
APR-045, ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်းတွင် အကျယ်(25x55) ရှိ တိုက်ခန်းအမြန်ငှားမည်။
APR-029, န၀ဒေးလမ်းတွင် အကျယ်(15x60) ရှိ တိုက်ခန်း အမြန်ငှားမည်။
ဒဂုံ ၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း ရှိ ငှားရန်ရှိသော မြေညီ ထပ်ခိုးပါ အခန်းကျယ် (Malihku Real Estate)
Shweproperty ID: S-1185931